Koritaanka gadhka ma la dedejin karaa? | Ragga Stylish
Koritaanka gadhku ma la dedejin karaa oo dhumucdiisuna way sii kordheysaa?
Waxaan ka baqeynaa in isboortiga gadhka sida sharafta leh sida Zach Galifianakis ay tahay arrin hiddo-wadaha
Caannimada weyn ee uu ku riyaaqay gadhka waxay horseeday faafitaanka habab mucjiso ah si ay dhaqso ugu koraan. Waxa kale oo jira kuwa sheegta inay ogyihiin talaabooyinka la raacayo si ay u yeeshaan dhumuc.
Qoraalkan waxaan kuugu sheegeynaa haddii ay runti suurta gal tahay dardar koritaanka gadhka ama kordhi dhumucdeeda:
1 Dedeji gadhka
2 Kordhi dhumucda gadhka
Waan ka xunnahay inaan kaa niyad jabinno, laakiin xaqiiqadu waxay tahay, ma jiraan wax badan oo nin uu sameyn karo si gadhkiisu u soo baxo si dhakhso leh. Waa inaad kaliya heysataa dulqaad oo sug milimitir millimitir si aad u gaarto dhererka la rabo.
Kordhi dhumucda gadhka
Rag badan ayaa leh garka khafiifka ah ama leh nabarro (meelaha timuhu ka weynaan waayaan). In kasta oo laga yaabo inaad ka akhriday qaaciidooyinka caanaha ama cuntooyinka si loo gaaro a gadhka ka sii dhumuc weyn, xaqiiqadu waxay tahay in hada aysan jirin wax kordhiya dhumucda gadhka. Waxa kaliya ee aan sameyn karno waa inaan baranno inaan jeclaano cilladaheena. Gadhka dadka ku yar ama dhejiska ah ayaa isna aad u fiicnaan kara haddii si habboon loo qeexo oo loo jaro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Koritaanka gadhku ma la dedejin karaa oo dhumucdiisuna way sii kordheysaa?
Talooyin ku saabsan garka jilicsan